တဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းလာနေသော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း JIMENA | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းလာနေသော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း JIMENA
Full resolution download (5,600 × 7,200 pixels, file size: 4.6 MB, MIME type: image/jpeg)
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Jimena က မက္ကဆီကို ရဲ့ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေကို ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိုးလေဝသခန့်မှန်းသူတွေက အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီး Jimena ဟာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်းကို ဆက်လက်ပြီး ကန်းရိုးတန်းနဲ့ အပြိုင် ဖြေးညှင်းစွာရွေ့လျားလျက်ရှိနေကြောင်း၊ ပြိးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းမှာဘဲ Jimena ဟာ တစ်နာရီကို ၂၂ဝ ကီလိုမီတာ (၁၄ဝ မိုင်) နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နေတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမ post မှာ ဖေါ်ပြခဲ့သလိုဘဲ မုန်တိုင်းကြီးဟာ မက္ကဆီကို ကမ်းခြေ Baja California peninsula ကို ဦးတည်ရွေ့လျားနေပြီး တင်္နလာနေ့ ညနေပိုင်း(သို့မဟုတ်) အင်္ဂါနေ့ အစောပိုင်းမှာ အဲဒီဒေသသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာကိုလဲ သိရပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ National Hurricane Center မှ Richard Pasch က – အဲဒီဒေသကို မုန်တိုင်းချဉ်းကပ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်တောင်ပြင်းမလဲဆိုတာ အတိအကျ မခန့်မှန်းနိုင်သေးကြောင်း၊ အားအလွန်ကောင်းတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်လာမှာကတော့ သေချာနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူကပြောထားပါတယ်။
အထက်ပါဒေသအတွင်း Los Cabos မြို့မှာ ပြင်သစ်အခြေစိုက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ညီလာခံကို အင်္ဂါနေ့မှာ ကျင်းပဖို့ အစီအစဉ်လဲ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီမြို့ကလေးကလဲ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဖြတ်သန်းသွားမဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ညီလာခံ ကျင်းပတာကို ရွှေ့ဆိုင်းဘို့ ရှိ/မရှီတော့ အခုထိ မသိရသေးပါဘူး။ အဲဒီဒေသမှာ အပန်းဖြေဘို့နဲ့ လေ့လာဘို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကတော့ ဒေသအတွင်းက ထွက်ခွာနေကြပါပြီ။
မက္ကဆီကို- Jaliso ပြည်နယ်ဒေသခံတွေကလဲ မုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကျရောက်ရင် ခိုလှုံနိုင်ဘို့ နေစရာတွေပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
The storm has winds of 220 kilometers per hour, and forecasters expect it to become even stronger !
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း JIMENA ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့်အခြေအနေအဆင့်ဆင့်
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: Hurricane, JIMENA. LeaveaComment »
« အဆင့်-၄ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း JIMENA
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KROVANH update »